people Nepal » उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्रको पार्टीले संविधान दिवसको दिन ‘कालो दिवस’ भन्दै विरोध गर्ने निर्णय ! उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्रको पार्टीले संविधान दिवसको दिन ‘कालो दिवस’ भन्दै विरोध गर्ने निर्णय ! – people Nepal
उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्रको पार्टीले संविधान दिवसको दिन ‘कालो दिवस’ भन्दै विरोध गर्ने निर्णय !
संघीय सरकारको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संविधान दिवसको सट्टा विरोध दिवस मनाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान दिवसको दिन विरोधमा ‘कालो दिवस’ भन्दै विरोध गर्ने औपचारिक निर्णय गरेसँगै फोरमले पनि संविधान दिवसको विरोध गर्न लागेको हो ।
‘संविधान दिवसको दिन प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गएन,’ राजपाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्री रायले भने, ‘अहिले अशोज ३ आउन केही समय बाँकी छ, त्यस्तै पर्यो भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै निर्णय गर्नु पर्ने आवश्यकता भयो भने कालो दिवस मनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बाट नै गर्न सकिन्छ ।’
रवि लामिछाने पत्नी निकिताले दिइन् एसपी दानबहादुर मल्लसहित ३ जनाविरुद्ध जाहेरी
सिहंदरबारभित्रै कर्मचारीको मृत्यु